देशलाई परदेशीको रेमिट्यान्स प्यारो, आज दुखमा अप्ठ्यारो ? यो कस्तो सोच? – कामना डेली
देशलाई परदेशीको रेमिट्यान्स प्यारो, आज दुखमा अप्ठ्यारो ? यो कस्तो सोच?
On २०७६ चैत्र २४, सोमबार १०:१२ Last updated Apr 6, 2020
महेश नेपाल। म अहिले यूएईको अबुधाबी ईमिरेट्स स्थित अल ऐन भन्ने ठाउँमा छु ।तर, म हाल यहाँ बस्दिनँ, यो देशमा काम गर्दिनँ भनेर स्वतन्त्र हिसाबले बस्न थालेको पनि २० दिन भैसक्यो । म घर फर्कन चाहेर कानुनी रुपमा स्वतन्त्र भइसकेको मान्छेले पनि घर फर्कन पाइनँ । कस्तो बाध्यता भनौं या परिस्थिती ।
स्वर्गद्वारी बिपद कोषमा सहयोग गर्नेहरु बढ्दै
कोरोना संक्रमितसंगै दाङ आएका अन्य ७ पनि अस्पतालमा